शीर्ष उपकरणहरू जसले तपाईंलाई अझ राम्रो सामग्री सिर्जना गर्न मद्दत गर्दछ - Semalt उपयोगी सुझावहरू
तपाईले आफ्नो सामग्री मार्केटिंग खेल अपग्रेड गर्न सक्नुहुन्छ अनुसन्धान सहयोगका लागि केहि उत्तम उपकरणहरू, एसईओ, र मार्केटमा एनालिटिक्स। यी उपकरणहरू हुन् जुन प्रयास गरिएको छ र कार्य गर्नका लागि प्रमाणित भएको छ।
विस्तृत सामग्री अनुसन्धानको अतिरिक्त, तपाईंले दिनहरू, हप्ताहरू पुन: लेख्न र सामग्री आफैंमा पॉलिश गर्न पनि खर्च गर्नुपर्दछ। अन्तमा, तपाइँको सामग्री बक्स जाँच गर्न सक्षम हुनुपर्दछ जब यो खोज इञ्जिनहरू र प्रयोगकर्ताहरू द्वारा ध्यान दिईन्छ।
सीपहरूको उत्तम सेटहरू पाउनु तपाईंलाई आवश्यक हेड स्टार्ट हो, तर यदि तपाईं अन्तिम झण्डा अवतरण गर्न चाहनुहुन्छ र तपाईंको प्रतिस्पर्धाबाट टाढा सुरु गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले यी उपकरणहरू पनि प्रयोग गर्नुपर्छ र तिनीहरूलाई तपाईंको आर्सेनलमा राख्नु पर्छ।
यहाँ, Semalt तपाईंको सामग्रीको गुणस्तर सुधार गर्नको लागि तपाईंलाई उत्तम र सबैभन्दा उत्तम उपकरणहरू बाहिर निकाल्ने तरिकाहरू देखाउँदै छ। यो लेखले उपकरणहरूको पूर्ण टुलबक्स प्रदान गर्दछ जुन उत्तम लेख सिर्जना गर्ने बिभिन्न क्षेत्रहरूमा फैलिएको छ। यसले सामग्री अनुसन्धान, सिर्जना, सम्पादन, र एनालिटिक्स समावेश गर्दछ।
हामी सुरु गरौं।
१. सामग्री अनुसन्धान
लेख्दा वा सामग्री सिर्जना गर्दा, पहिलो बाधा तपाईंको पहिलो शब्दमा टाइप गर्नु अघि टाढा पुग्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। सामग्री लेख्न वा सिर्जना गर्नु अघि, त्यहाँ अक्सर लामो अनुसन्धान संलग्न हुन्छ। यो अनुसन्धान प्रक्रिया जुन जन्म सामग्री सामग्री, प्रतिस्पर्धाको शस्त्रागार (स्कूपिंग) मा के हतियारहरु को एक राम्रो विचार, र सबै भन्दा राम्रो खोजशब्दहरु को पहिचान को एक राम्रो विचार।
भाग्यवस Semalt जस्ता सामग्री सिर्जनाकर्ताहरूको लागि, हामी दर्जनौं सामग्री अनुसन्धान उपकरणहरूबाट थप मद्दत लिने बारे जान्दछौं। यी उपकरणहरूले हामीलाई अनुसन्धानको प्रक्रियालाई सुव्यवस्थित गर्न र तथ्य तथ्या checked्क मात्र होइन तर अनौंठो सामग्री विचारहरू नियमित रूपमा आउँदछन्।
यहाँ केहि सामग्री अनुसंधान उपकरणहरू छन् जुन तपाइँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ:
BuzzSumo एक उत्कृष्ट अनुसंधान उपकरण हो किनभने यसले सम्पूर्ण सामग्री अनुसन्धान प्रकृयाको सरल बनाउनमा लामो यात्रा गर्छ। कुञ्जीशब्दहरूमा आधारित लोकप्रिय पोस्टहरूमा तान्दै यो आश्चर्यजनक कार्य गर्दछ।
यस विश्लेषणबाट प्राप्त परिणामहरूलाई त्यसपछि सामाजिक मिडिया प्लेटफर्महरू जस्तै फेसबुक, ट्विटर, र Pinterest मा तिनीहरूको नेटवर्क अनुसार क्रमबद्ध गर्न सकिन्छ। यसले तपाइँको सामग्री विचारहरूको लागि के गर्छ भनेर महत्त्वपूर्ण जानकारीमा पहुँच दिन्छ। यी विचारहरू तपाइँको लक्षित श्रोताको लागि विशेष रूपमा लक्षित गरिएको छ, सबै सामग्रीहरू तपाइँको सामग्रीलाई ठोस बनाउँदै। तपाइँ तपाइँको खोज परिष्कृत गर्न कस्टम फिल्टर पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
यद्यपि यो उपकरण विशेष रूपमा खोजशब्द अनुसन्धानको लागि डिजाइन गरिएको हो, यसले सामग्री विचारहरू सिर्जना गर्न यसको प्रयोगमा ठूलो फाइदाहरू देखाउनुपर्नेछ जुन तपाईंको दर्शकहरूको ध्यान निश्चित रूपले समात्नेछ।
यस उपकरणले गुगल सुझाव र गुगल विज्ञापन कुञ्जी शब्द योजनाकारको सल्लाहहरूको प्रयोग गरी बीज कुञ्जी शब्द विस्तार गरेर काम गर्दछ। केहि केसहरूमा, यस उपकरणको नतिजामा कुञ्जी शब्द विचारहरू समावेश हुन्छन् जुन सामग्रीको लागि शीर्षकमा पूर्ण रूपमा फिट हुन्छ वा विषय आफै सिर्जना गर्दछ। लामो पुच्छर शब्दहरूको रूपमा, तपाईले एक विषयको रूपमा धेरै राम्रो उपयोग पाउनुहुनेछ कि तिनीहरूसँग पहिले नै उत्तम सद्भावमा तीन वा बढी सर्तहरू छन्।
Ubersuggest प्रयोग गरेर, तपाईंसँग सामग्रीको लगभग अन्तहीन आपूर्ति, योग्य विचारहरू र मुद्दाहरू छन्।
तपाईंको सामग्रीको शक्ति तपाईंको टीमको बलमा निर्भर गर्दछ। अनुभव बाट, सामग्री लेखक एक टीम को रूप मा काम को मूल्य को सराहना गर्छन्। जबसम्म तपाईं आफ्नो परियोजनामा ​​दाहिने हातहरू कायम राख्न सक्नुहुन्छ, राम्रो सामग्री विचारहरूको साथ तपाईंको आउने सम्भावनाहरू त्यति नै राम्रो छ। थपिएको मानव शक्तिको साथ, तपाईं लेख्न, सम्पादन गर्न, र एक, दुई, वा तीनको टोली भन्दा छिटो सामग्री प्रकाशित गर्न सक्नुहुनेछ।
एक आदर्श सामग्री टीम सिर्जना गर्दा, त्यहाँ हुनुपर्दछ:
एक अन्वेषक कसैले अनुसन्धानको स्रोत लिन्छ र स्रोतहरू खोज्छ।
कुशल सामग्री रचनाकारहरूको टोली। लेखकहरूको टोलीसँग कुरा गरेर सामग्रीको दायरा सीमित नगरौं। यद्यपि तपाईसँग सबै भन्दा राम्रो हुनुपर्दछ। यदि तपाईं आफ्नो सामग्री भिडियोहरू बनाउन चाहनुहुन्छ भने, राम्रो भिडियो सिर्जनाकर्ताहरू लिनुहोस्, र लिखित सामग्रीको लागि, उत्कृष्ट लेखकहरू पाउनुहोस्।
तपाईले जारी गर्ने आशाको सामग्रीको प्रकार र प्रकृतिको विस्तृत ज्ञानका साथ पेशेवर सम्पादकहरू पाउनुहोस्।
मार्केटर्सहरू जसले सामग्री सुनिश्चित गर्नका लागि जिम्मेवार छन् सही स्क्रीनहरूमा समाप्त हुन्छ।
तपाईंसँग ग्राफिक डिजाइनरहरू हुनुपर्दछ तपाईंको सामग्रीलाई मसाला बनाउन मद्दत गर्न को लागी दर्शकहरू उनीहरू मार्फत जान सक्छन्।
यस प्रणालीलाई प्रवाहित राख्न, तपाईंलाई एक प्लेटफर्म आवश्यक पर्दछ जसले सहयोग, फाइल साझेदारी, र प्रोजेक्ट ट्र्याकिंगलाई स्ट्रिम गर्दछ। यहाँ केहि उपकरणहरू छन् जुन तपाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ
। € ¢ गुगल कागजातहरू
गुगल कागजात धेरै सामग्री मार्केटि teams टोलीहरू प्रयोग गर्दछ किनभने यो एक महान, नि: शुल्क, र व्यापक रूपमा उपलब्ध सामग्री साझेदारी उपकरण हो। क्लाउड-आधारित प्लेटफर्मको रूपमा, विचारहरू बहु प्रयोगकर्ताहरूसँग जानकारी साझा गर्न सकिन्छ र एकल कागजातको रूपमा कार्य सार्न।
गुगल कागजातमा सबै सुविधाहरू छन् जुन तपाईंले वर्डिकल प्रोसेसरबाट आशा गर्न सक्नुहुन्छ। यसले प्रयोगकर्ताहरूलाई फन्टहरू अनुकूलित गर्न, बुलेटेड सूचीहरू सिर्जना गर्न, छविहरू थप्ने, तालिकाहरू सम्मिलित गर्ने, आदि अनुमति दिन्छ। गुगल कागजातको साथ, तपाईं चाँडै स्क्रीनको माथिल्लो दाहिने भागमा शेयर बटन मार्फत टोली सदस्यहरू बीच फाईलहरू साझेदारी गर्न सक्नुहुनेछ।
ck € ¢ ढिलो
यो व्यवसाय, बजार, र टीमहरूको लागि एक प्रसिद्ध र प्रभावशाली सहयोग उपकरण हो। प्रयोगकर्ता-अनुकूल उपकरणको रूपमा, यसले छविहरू, कागजातहरू, मेम्स, भिडियोहरू, र अधिक साझेदारी गर्न रमाइलो वातावरणको लागि अनुमति दिन्छ। स्लक ईमेल संचार बदल्नको लागि डिजाइन गरिएको हो। यसले कम्पनीको व्यवस्थापनमा बढि मूल्य थप गर्दछ किनकि तपाईले निगरानी गर्न सक्नुहुनेछ कि कहिले कर्मचारीहरू लग ईन-आउट गर्छन्।
यसले तपाईंको सामग्रीको विकासलाई मद्दत गर्दछ किनकि सञ्चार कुञ्जी हो। ढिलोसँग, कम्पनीहरूले विभागहरू बीच सहकार्य गर्न सजिलो पाउँदछन् र सुनिश्चित गर्दछन् कि सामग्रीको प्रत्येक टुक्रा उपयुक्त च्यानलहरूमा प्रवाहित हुन्छन्।
सामग्री कसरी सिर्जना गर्ने जान्ने पर्याप्त छैन। तपाईलाई यो पनि थाहा हुनुपर्दछ कि खोजीको लागि यस सामग्रीलाई कसरी अनुकूलित गर्ने। सामग्रीको गुणवत्ता, कुनै श doubt्का, महत्त्वपूर्ण छ। जहाँसम्म, यदि तपाईं उपशीर्षकहरू, कुञ्जीशब्दहरू, र अनुच्छेदहरूको सही प्रयोग जस्ता अन्य कारकाहरूलाई बेवास्ता गर्नुहुन्छ भने, सामग्रीले यसलाई SERP बनाउँदैन। निहित द्वारा, तपाइँका सबै प्रयासहरू बर्बाद गर्न सकिन्छ।
यी केहि उपकरणहरू छन् जुन तपाईंलाई तत्काल अनुकूलन गर्न मद्दत गर्दछ।
वेब मालिकको रूपमा तपाईले WordPress को बारेमा सुन्नुभयो होला। यदि तपाईंसँग छैन, यो वेब निर्माणको लागि सबैभन्दा धेरै प्रयोग गरिएको सामग्री व्यवस्थापन प्रणाली हो। यसमा, योआस्ट एसईओ प्लगइन छ जुन हुनै पर्छ भन्ने प्रमाणित छ। एकचोटि तपाईंले योआस्ट स्थापना गर्नुभयो, यो पढ्न योग्यता र एसईओ मित्रवत तपाईंको सामग्री वास्तविक समय मा छ कसरी रेटिंग द्वारा काम गर्न सक्दछ।
यो सामग्री पहिचान गर्न र सुधार गर्न प्रयोग गरिन्छ जुन सामग्रीमा समस्या उत्पन्न गर्न सक्दछ। Yoast ले यसको प्रयोगकर्ताहरूलाई व्यक्तिगत पोष्टहरूको लागि फोकस कीवर्डहरू सेट गर्न दिन्छ। यसले तपाईंलाई उद्देश्यहरूको चेकलिस्ट प्रदान गर्दछ जुन, जब टिक गरिन्छ, तपाईंको सामग्रीको अप्टिमाइजेसन सुनिश्चित गर्दछ।
दिमागमा राख्नुहोस् कि योआस्ट केवल एक उपकरण हो। राम्रो जानकारी तपाईले प्रदान गर्नुभयो, राम्रो परिणाम। तपाई अझै पनी आफ्नो कीवर्ड र प्रतिस्पर्धी अनुसन्धान गर्न चाहानुहुन्छ निश्चित गर्नका लागि तपाईको सामग्रीलाई साँच्चिकै अनुकूलित गरिएको छ।
SEMrush धेरै एसईओ पेशेवरहरु को लागी मनपर्ने छ यसको डाटा को सम्पत्ति र अन्तर्दृष्टि को लागी धन्यवाद यसले SEO को लागि प्रदान गर्दछ र एक प्रतिस्पर्धी अनुसंधान उपकरण, सामग्री निर्माण उपकरण, र लिंक निर्माण अवसरहरु को रूपमा। यो प्रिमियम एसईओ उपकरण हो जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई लक्षित कुञ्जी अनुसन्धान गर्न वा प्रतिस्पर्धाको सामग्री रणनीतिमा जासूसी गर्न अनुमति दिन्छ।
एक उपकरणको रूपमा, यससँग यस भित्र अर्को कुञ्जी शब्द जादुई उपकरण पनि छ जसले तपाइँलाई उच्च खोजी भोल्युम, कम प्रतिस्पर्धा कुञ्जी शब्द जुन वेब पृष्ठहरू, वा अद्भुत ब्लग पोष्टहरूको रूपमा सेवा दिन सक्छ। यस उपकरणको प्रयोग गरेर, विशेष गरी एसईओ सामग्री टेम्प्लेट र एसईओ लेखन सहायकको साथ, तपाईंको जैविक यातायात बढाउन, ब्याकलिks्क निर्माण गर्न, र तपाईंको प्रतिस्पर्धाबाट अलग रहन मद्दत गर्दछ।
Read. पढ्न योग्यता
के तपाइँ सामग्री सिर्जना गर्दै हुनुहुन्छ जुन प्रयोगकर्ताहरू पढ्न चाहन्छन्, वा के खोज ईन्जिन बट्सलाई मात्र राम्रो लाग्ने कुरा सिर्जना गर्दै हुनुहुन्छ? यदि तपाईंसँग सामग्री छ जुन दुबै गर्न सक्छ, तपाईं महानताको लागि आफ्नो बाटोमा हुनुहुन्छ। यहाँ केहि उपकरणहरू छन् जुन तपाईंलाई तपाईंको सामग्री पढ्न योग्यको बनाउन मद्दत गर्दछ। तिनीहरूले तपाईंलाई अधिक यातायात ड्राइव गर्न अनुमति दिनेछ र प्रयोगकर्ताहरूलाई संलग्न गराउन तिनीहरूलाई सुरुदेखि अन्त सम्म तपाईंको सामग्रीमा चिपकाएर राख्नुहोस्। पठनीयता महत्त्वपूर्ण छ किनकि प्रत्येक श्रोतासँग यसको विषयवस्तु छलफल गर्दा यसको स्तर हुन्छ जुन तपाईंले आफ्नो सामग्री निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ।
â € ¢ व्याकरण
व्याकरण एक उपकरण छ जुन सामग्री निर्माता र सम्पादकहरूको एक राम्रो संख्या द्वारा प्रयोग गरीन्छ। यस उपकरणले व्याकरणीय मुद्दाहरू र यसको पढ्न योग्यताको लागि तपाईंको सामग्रीको विश्लेषण गर्दछ। यो गुगल कागजातहरू, केहि सामाजिक मिडिया, र अन्य सामग्री प्लेटफर्महरूको लागि एक विस्तार उपकरणको रूपमा सेवा गर्न सक्छ। व्याकरणसँग, तपाईं हिज्जे त्रुटिहरू र तपाईंको सामग्रीको पठनीयता मुद्दाहरूको जाँच गर्न कम समय र प्रयास खर्च गर्नुहुन्छ। तपाइँ कुनै समय र विश्राम मा गर्न सक्नुहुनेछ, यो जानेर कि तपाइँको सामग्री त्रुटिमुक्त छ र तपाइँको श्रोताको लागि पर्याप्त राम्रो छ।
ming € ¢ हेमिंग्वे अनुप्रयोग
यस अनुप्रयोगको व्याकरणसँग समान कार्यहरू छ। त्यहाँ केवल दुई मुख्य भिन्नताहरू छन्; पहिलो कि यो नि: शुल्क हो, र दोस्रो कि तपाइँ तपाइँको सामग्री सीधा सामग्री सम्पादकमा टाँस्नुहोस्। एकचोटि तपाईंले यो गरेपछि, उपकरणले सुधार गर्न सकिन्छ भनेर तपाईंको सामग्रीको विश्लेषण सुरू गर्दछ।
जे भए पनि कुनै पेशेवरले जे भन्छन्, त्यसलाई सामना गरौं, त्यहाँ सधै सुधारको लागि ठाउँ हुन्छ। प्रदर्शन मीट्रिक्सलाई बुझेर, सामग्री उत्पादकहरूले के काम गर्छ र के बेवास्ता गर्छन् भनेर पत्ता लगाउँदछ। यसले उनीहरूको दिमाग तिखार्न मद्दत पुर्‍याउँछ डाटा अन्तर्निर्णित निर्णयहरूको मस्यौदामा यी अन्तर्दृष्टिलाई उपयोगी जानकारीमा रूपान्तरण गर्न।
। € ¢ इन्स्पेलेट
यो उपकरणले तपाइँको साइटमा आगंतुकहरूले के देखे र पढेका छन् देखाउँदछ। यसले तपाइँलाई देखाउँदछ कसरी तपाइँ केवल क्लिकबाट पाठकहरूलाई सम्भावित लिडमा रूपान्तरण गर्न सक्नुहुन्छ। निरीक्षण गर्नुहोस् प्रयोगकर्ताहरूको व्यवहारलाई निरीक्षण गर्नुहोस् र त्यसपछि उनीहरूले साइटमा कतिन्जेल बसे र कसरी उनीहरूले सामग्रीसँग कुराकानी गरे डेटा डेटा दिन्छ। यस तरिकाले तपाईलाई के थाहा छ तपाईको श्रोताको ध्यान कुन कुराले बढी आकर्षित गर्छ। यस उपकरणको साथ तपाई आफ्नो वेबसाइटमा एडीको हिल पहिचान गर्न सक्नुहुनेछ र त्यस्ता कमजोरीहरू सच्याउन सक्नुहुन्छ।
सामग्री कुनै पनि डिजिटल मार्केटिंग रणनीतिको जीवन र रगत हो। यो तपाइँको ब्रान्ड अनलाइन स्थापना गर्न को रहस्य हो। हाम्रो सहायताले तपाईले सही निर्णयहरू लिनुहुनेछ। आज हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। हामीसँग ठूलो बन्दूक छ र यसलाई बुद्धिमानीपूर्वक प्रयोग गर्ने सीपहरू छन्। हाम्रो सहायताको साथ, तपाईं आराम गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईं उत्तम सेवाहरू पाउँदै हुनुहुन्छ।